Mareykanka oo uga digay Ciraaq in ay u kala qaybsanto hab isir ku salaysan. – Radio Daljir
Mareykanka oo uga digay Ciraaq in ay u kala qaybsanto hab isir ku salaysan.
Washinghton,Dec,21 -Madaxweyne kuxigeenka dalka Maraykanka Joe Biden ayaa ku booriyey hogaamiyayaasha dalka Ciraaq inay ka wada shaqeeyaan xalinta khilaafka dhinaca isirka ee dalkaasi ka soo cusboonaaday.
Aqalka Cad ee looga arimiyo dalkaasi Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne kuxigeenka Maraykanka Mr Biden uu mar uu khadka telephone-ka kula hadlay reysalwasaaraha Ciraaq Nuuri Al-maaliki uu uga digay khatarta ku aadan kala qaybsanaanta ka soo ifbaxaysa dalkaasi Ciraaq.
Cabsida ugu daran ee laga muujinayo dalka Ciraaq ayaa ku aadan inay burburto dowlada wadaagga ah ee halka sano jirta ee uu hogaamiyo Reysalwasaare Nuuri Al-maaliki , kaddib ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Ciraaq.
Waddamada gobollka iyo jihooyin caalami ah ayaa sidoo kale bixiyey welwelka ay ka qabaan in Ciraaq ay mar kale dib ugu noqoto dagaalki dhinaca kooxha diimaha ee Sunniga iyo Shiicada oo socday intii u dhexeysay sanadihii 2006dii iyo 2007dii.
Kutlada ama Kooxda Baarlamaaniga ah ee Sunniyiinta Ciraaq ee lagu magcaabo Al-Ciraaqiya ayaa qaadacday kulamada baarlamanka iyo golaha wasiirada ee dalkaasi ,iyagoo ka cabanayaa waaran loo jaray madaxweyne Ku xigeenka dalkaasi Daariq Al-Haashimi .
Reysalwasaare ku xigeenka dalka Ciraaq Saalex Mudlaq oo ah siyaasi Sunni ah ayaa sheegay in Ciraaq ay soo foodsaartay qalalaaso iyo wax uu ku tilmaamay masiibo, waxana siyaasigan uu hadlay kaddib markii ay soo bexeen warar sheegaya in isaga laftigiisa la doonayo in loo qaado codka kalsooni-darrada.
Tan iyo markii xukunka laga tuuray nidaamkii saddam xuseyn iyo xisbigiisii ay u badnaayeen sunniyiinta ee Xisbul Bacathka ,ayaa waxaa isasoo tarayey cabashooyinka Sunniyiinta ee ku aadan in shiicada u badan dalkaasi Ciraaq ay doonayaan in la wiiqo awoodaha sunniyiinta.
Maraykanka iyo dhanacyo kale oo caalami ah ayaa walaac ka muujinaya in Ciraaq ay dib lugaha ula gasho dagaalkii dhinaca isirka ahaa, kaddib ka bixitaankii ciidamada Maraykanka ee dalkaasi, iyadoo sidoo kale laga digayo kaalinta dalka Iran ee arimaha gudaha ee Ciraaq , waxaana dalalka gobolka ee Sunniga ah ay ku jiraan xaalad taxader leh,iyagoo horey ugu canaantay dalka maraykanka sida uu Ciraaq ugu gacangeliyey shiicada dalkaasi oo la la filankaro in ay mustaqbalka gacan-saar la yeeshaan Shiicada Iran.
Xaalada Murugsan ee dalka Ciraaq ayaa imanaysa, iyadoo gobolka Bariga Dhexe iyo dunida carabta guud ahaan ay ka jiraan kacaanno bedelaya xididada dowladaha carabta , waxaan meel sare maraya dareemada kacaandoonka ah ee shucuubta carabta.